JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ဌာနချုပ်ဖြစ်သော တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) ဒေသ နန်ဇော် နှင့် လမျန့်ကျေးရွားကြားသို့ ရောက်ရှိလာသော ဗမာအစိုးရ တပ်မ (၈၈) လက်အောက်ခံ အင်းအား (၂၂) ခန့် ပါဝင်သော စစ်ကြောင်းနှင့် ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၃) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ နိုင်ဝင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ မနက် (၈း၀၀) နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရဘက်မှ (၂) ပွင့် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးနှင့် ရဲဘော်တစ်ဦး ပြင်းထန်စွား ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
At 08:00 AM on 17th November, there wasabattle between KIA (3rd) battalion’s patriotic soldiers and about 22 Burmese (88) division in Nang Zaw and Lamyang villages, which is under KIA (3rd) battalion and KIA (5th) Brigade area, according to the KIA front-line officer report. (1) Burmese captain and (1) Burmese soldier were injured seriously in that battle.
ya na zawn na lu ai grai ngun lu nngai.KIA myu tsaw share shagan ni hpe chyoi pra ai wye nyi karai lam woi ya nga uga. tai hpyen hpe dang manga kau lu na matu galoi mung akyu hpyi garum ya nga nngai.KIO/KIA hpe kam hpa let myu tsaw myit majing hte(tsit tsawm bum)